विद्यार्थीलाई खाली खल्ती एक हप्ताको साइकल यात्रामा पठाउने विद्यालय - Smart City || Smart News विद्यार्थीलाई खाली खल्ती एक हप्ताको साइकल यात्रामा पठाउने विद्यालय - Smart City || Smart News
२३ मंसिर २०७८, बिहीबार १५:४०
पढ्न लाग्ने समय : >7मिनेट ४५५
विजयमणि पौडेल, मंसिर २३
‘हिजोको दासप्रथा वा कति कुरालाई आज हामी अन्धविश्वास वा कुप्रथा भन्छौं। आजको शिक्षालाई केही वर्षपछि त्यस्तै त्रास, घृणा र अविश्वासको नजरले हेरिनेछ।’
उनलाई लाग्छ, परीक्षामा कम अंक ल्याएको आधारमा बालबालिकालाई ‘असफल’ को ट्याग लगाइने आजको ‘स्कुलिङ’ मानवताविरूद्धको एक ठूलो अपराध हुन सक्छ।
उनी भन्छन्, ‘२० वर्षपछि हामीलाई पश्चाताप हुनेछ। त्यस बेला हामी भन्नेछौं कि निर्दोष बालबालिकालाई हामीले किन यस्तो गर्‍यौं!’
उनलाई यस्तो लाग्नुको कारण हो- आजका ‘शिक्षित’ विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो परम्परा, पुर्खा, संस्कृतिप्रति लज्जाबोध हुन्छ। उनीहरूलाई पसिना बगाउने काम गर्न लाज लाग्छ। आजको विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो भाषामा बोल्दा पिटाइ खान्छन् वा सजाय भोग्नुपर्छ। किसान बन्न कसैलाई पनि उत्प्रेरित गरिँदैन। आफ्नो समुदाय र पुर्खाको सबै ज्ञानलाई ‘अज्ञान’ वा ‘रुढीवाद’ भन्दै सिकाइएको छ। अनि, ‘शिक्षित’ र ‘अशिक्षित’ बीच एउटा खाडल सिर्जना गरिएको छ जसले सामाजिक समन्वय भत्काउने निश्चित छ।
यस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई ‘खोजी’ भनिन्छ। यसलाई ‘युनिभर्सिटी’ भनिए पनि यो अन्य विश्वविद्यालय जस्तो लाग्दैन।
हरेक व्यक्तिको जीवनमा ‘स्वराज’ ल्याउने दर्शनबाट प्रेरित यस विश्वविद्यालयको सिकाइको तरिका महाभारतका पात्र एकलव्यबाट प्रभावित छ। एकलव्यजस्तै यहाँ ‘खोजी’ हरू आफ्नो रूचि, प्रश्न, सरोकार र सपनाको आधारमा आफ्नो ‘सिकाइ’ आफैं डिजाइन गर्छन्।
यस सिकाइको क्रममा उनीहरू समुदाय र पर्यावरणसँग नजिक हुन्छन्। मूलधारको स्कुल-कलेजमा ‘विज्ञ’ र ‘शिक्षित’ नमानिने समुदायका आम मानिसहरूसँग सिक्छन्। कक्षाकोठाको भित्ताबाहिर वास्तविक जीवनका अनुभवहरूसँगै सिक्छन्। उनीहरू पहिल्यै सिकेको कतिपय कुरालाई छोड्ने कोसिस गर्छन्।
म आफूआबद्ध किङ्स कलेजका केही शिक्षकहरूसँगको भेटघाटमा मनिष जैनले सोधे, ‘जिन्दगीमा अगाडि बढिरहन कुन कुराले उत्प्रेरित गरेको छ?’
कुराकानीको क्रममा उनी सुनाउँदै थिए, स्वराज विश्वविद्यालयमा ‘खोजी’ हरूलाई सिकाइको दौरान एक हप्ताको साइकल यात्रामा पठाइने रहेछ। त्यस समय उनीहरू पैसा बिना साइकलमा विभिन्न समुदायमा गएर बस्नुपर्ने रहेछ। उनीहरू आफैंले आफ्नो लागि खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ।
‘खोजी’ हरूसँग एक सातासम्म खल्तीमा पैसा हुँदैन। विद्यालय/कलेजमा सिकेर आएको ज्ञान र अंग्रेजी भाषा काम लाग्दैन। उनीहरूले मोबाइल फोन र कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामान बोक्दैनन्।
उक्त एक सातामा धेरै ‘खोजी’ हरूको ‘आफूलाई धेरै कुरा आउँछ’ भन्ने अभिमान चकनाचुर हुन्छ। गाउँलाई पिछडिएको मान्ने र गाउँलेहरूलाई ‘असभ्य’ देख्नेहरूको सोचमा हलचल आउँछ। उनीहरूलाई गाउँलेहरूको जीवन-कथा थाहा हुन्छ। उनीहरूको सामर्थ्य र समस्याहरू थाहा हुन्छ।
उनीहरू विद्यालयमा हुँदा सधैं ‘अविकसित’ र ‘अशिक्षित’ भनेर चित्रित गरिएका गाउँका मानिसहरूमा ज्ञान देख्न थाल्छन्। उनीहरू ‘शिक्षित’ भनिएका मानिसहरूमा कमै देखिने मानवता, विनम्रता, सहजता, उद्यमशीलता, आदि गाउँका मानिसहरूमा देख्न थाल्छन्।
एउटा भनाइ नै छ- मानिसले कि पढेर सिक्छ, कि परेर सिक्छ। स्वराज विश्वविद्यालयले ‘पढेर’ र ‘परेर’ मात्र होइन, ‘गरेर’ सिक्ने तरिकालाई आफ्नो शैक्षिक गतिविधिमा समावेश गरेको रहेछ।
उनका छरछिमेक, साथी र आफन्तहरू मधेशीहरूलाई काठमाडौंमा हेपेर बोलाउँथे। त्यसमा उनलाई केही वास्ता लाग्दैन थियो। दुई वर्ष मिथिला बिहारी नगरपालिकाको एउटा गाउँमा काम गरेर फर्केपछि उनी भन्छिन्, ‘अचेल कसैले मधेशलाई अपमानजनक सम्बोधन गर्‍यो भने म आफैंलाई भनेजस्तो लाग्छ। रिस उठ्छ। चित्त दुख्छ। म तत्काल विरोध जनाउँछु।’
एकपटक उनले पढाउने विद्यार्थीहरूले उनलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरूको दसैं हामी सबैले मनाउछौं। हाम्रो छठ तपाईं किन मनाउनु हुन्न? तपाईंले बोल्ने नेपाली हामी सबैले बोल्ने। हाम्रो मैथिली तपाईंले किन नबोल्ने? तपाईंले किन नेपालीमा पढाउने? हामी सबैले बुझ्ने हाम्रो भाषामा किन नपढाउने?’
उनले नेवारी र मैथिली संस्कृतिमा केही समानता देख्न थालिन्। विवाह गर्ने विधि केही मिलेजस्तो लाग्यो। आफ्नो घरमा पाक्ने ‘ग्वार्चा’ सँग मिल्दोजुल्दो परिकार उनले धनुषामा पनि देख्न थालिन्। पैसालाई नेवारीमा जस्तै मैथिलीमा पनि ‘ढेवा’ भनिने कुरा पत्ता लगाइन्।
असंख्य भिन्नताहरू भए पनि समुदायमा घुलमिल भएपछि उनलाई सबै आफ्नो जस्तो लाग्न थाल्यो। उनलाई अचेल त्यो दुई वर्षको अनुभव एक विश्वविद्यालयमा गएर सिकेजस्तो लाग्छ जसले उनको सोच र व्यवहार नै परिवर्तन गरेको छ। उनलाई अझ बढी ‘मानिस’ हुन सिकाएको छ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विद्यालय र समुदायबीच एउटा भेद खडा गरेको छ। पढेर ‘डिग्री’ लिनेहरूलाई ‘विद्वान’ भनियो। पढ्न नपाउनेहरू वा नपढ्नेहरूलाई ‘अनपढ/अशिक्षित’ भनियो। पढ्न नसक्ने/नपाउनेलाई केही आउँदैन भनियो। उनीहरूको जीवनको अवमूल्यन गरियो।